Taliska ciidanka Asluubta oo dalbaday in la banneeyo xarumihii Asluubta ee gobollada Sh/dhexe iyo Hiiraan – Radio Muqdisho
Taliska ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ayaa ka dalbaday dadka degan xarumaha ciidanka ee gobollada Sh/dhexe iyo Hiiraan iney uga guuraan sida ugu dhaqsiyaha badan.
S/guuto Xuseen Xasan Cismaan taliyaha ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ayaa sheegay in ciidanka Asluubta uu gobolladaasi ku leeyahay xabsiyo, beero iyo xarumo kale oo u gaar ah ciidanka Asluubta, wuxuuna ugu baaqay dadka deggan xarumahaasi iney isaga guuraan.
Taliyaha ayaa tilmaamay in ciidanka Asluubta uu dib uga howlgaliayo gobolladaasi sidaasi darteedna ay lagama maarmaan tahay in la banneeyo xarumaha ciidanka si dib u dhis iyo qalabeyn loogu sameeyo.
Wuxuu xusay taliyaha in beerihii ciidanka Asluubta iyo xeryooyinkii agoonta ee gobollada Sh/dhexe iyo Hiiraan ay dad si sharci darro ah ku deganyihiin, isagoo ku boorriyay dadka deggan dhulalka ciidanka asluubta ineey banneeyaan.
Taliyaha ayaa ka digay in haddii la banneeyn waayo dhulalka ciidanka Asluubta ay sharciga la tiigsan doonaan qolooyinkaasi.
Maamulka gobolka Sh/Hoose oo ku amray hey'adaha samafalka iney is diiwaangeliyaan